‘मेरो घरमा साइकल छैन, मेरो असिस्टेन्टको घरमा कार कसरी आयो केपी ओली जी ?’
‘मेरो घरमा साइकल छैन, मेरो असिस्टेन्टको घरमा कार कसरी आयो केपी ओली जी ?’
नेपाल बिग्रिनुमा सबैभन्दा ठुलो हात कर्मचारीको छ । नेताले कति फटाइ गर्यो नेतालाई बोलाएर सोध्नुहोस् । मैले पनि चालिस वर्ष जागिर खाएको छु । शान्ति मन्त्रालयमा म विद्रोहि सेना हेर्थे ।
अहिले एक जना मान्छे ल्याउनुहोस् त, प्रेम सञ्जेललाई सोर्स लगाएर उल्टोलाई सिधा बनाएको छु भन्ने ? म लल्कारेर भन्छु रंगशालामा आउनुहोस, चालिस वर्षको अवधिमा प्रेम सञ्जेललाई के के कुरामा घुस खुवाइयो भन्नुस् । के के कुरामा सोर्स फोर्स लगाइयो । १८ वटा माननियको चुनाव त मैले हिजो अस्ति गराएर आएको हो नि । तै पनि म कुनै पार्टीतिर लागेको थिए भनेर कसैले भन्न सक्छ ।
मेरा विरुद्ध त सबैले उजुरी गर्छन् । घुस खान पाइदैन, सबै कर्मचारी मेरो विरुध्दमा छन् । सबै उद्योगपतिहरु मेरो विरुद्धमा छन् किनभने मैले न्युन पारिश्रमिक लागु गर्ने मामिलामा कसैसँग सम्झौता गर्दिन भनेर भनेको छु ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ को साझा मार्गमा नक्कली तमोर मेवा जलविद्युत आयोजना भनेर अफिस राखेर घर भाडामा लिएर शाखा अधिकृतदेखि पिउन सम्मका मान्छेहरु नियुक्ति गरेर सापटि लिएको भनिएता पनि त्यो घुसको रकमले ५० जनालाई नियुक्ति पनि गर्यो ८ महिनाको तलब पनि दिएन अनि त्यो ठगि गर्ने गुणराज ओझालाई मैले पक्राउ गरेर ल्याएर अहिले मुद्दा हालेको अवस्था छ ।
जहाँ नगरपालिका छ जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान छ, त्यस्तामा ३ वटा घर भाडामा लिएर ५० जना मान्छे राखेर ८ महिना ठगेको छ । कर्मचारीले के हेर्छन् ? साइनबोर्ड राख्ने बित्तिकै जिल्ला प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सिडियोहरु आकर्षित हुनुपर्ने होइन ? त्यसरी ठगिका मामिला पनि मेरो सरुवाका कारण हुन सक्छन् । सबै भन्दा गतिलो कारण भनेको वैदेशिक श्रम स्विकृति यहाँबाट आउँदैछ र त्यसमा घुस खान पाइदैन भनेर मलाई ठेलेको हो । तर म त्यसै जानेवाला पनि छैन ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टजि मेरो घरमा साइकल छैन मेरो असिस्टेनको कार कहाँबाट आयो ? ४० वर्ष जागिर खाएर मेरो घरमा साइकल छैन म भन्दा मुनिका मान्छेको कार कसरी आयो केपि शर्मा ओली जि ? केपी ओलीले किन्देको हो ? गोकर्ण विष्टले किन्देको हो ? कि सचिव महेश दाहालले किन्देको हो ? अनि मलाई सरुवा गरेको हो ? त्यसको थाहा चाहियो मलाई त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो त्यसलाई मलाई मुद्दा चलाए भइहाल्छ ।
तपाईहरु नझुक्किनु होला यो सरुवा हो । र यो सरुवा गरेको मलाई महेश दाहालले जवाफ दिनु पर्यो । कुबेलामा सरुवा भयो भने सरुवा पत्रमा कारण लेख्नु पर्छ, मेरो सरुवा के कारणले भयो लेख्नु पर्यो नि त । दुई वर्ष पुगेर भएको भए मेरो बाउको विर्ता होइन म गइहाल्थे नि । तर दुइ वर्ष नपुगिकन सरुवा गर्यो भने कारण लेख्नु पर्छ ।
मेरो कि कारण लेखिनु पर्यो कि मैले कारण खोज्नु पर्यो । समयले भन्छ म कहाँ जानु पर्ने हो । जेल जानु भन्छ भने म जेल जाउँला, स्वर्ग जानु भन्छ भने स्वर्ग जाउँला, नर्क जानु भन्छ भने नर्क जाउँला । त्यो सब समयले भन्ने हो ।
नेपाल बिग्रिनुमा सबैभन्दा ठुलो हात कर्मचारीको छ । कर्मचारी भ्रष्ट छन् । को राजनितिज्ञ हो को कर्मचारी हो थाहा पाइदैन ।
मलाई जापानमा एक घण्टा पढाएको ५० हजार दिन्छ, यहा ३० हजार पनि हुदैन । घुस खान्न । यस्तो देशमा बस्दा पनि यसरी टर्चर दिने हो भने सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल कता हुने हो । कि यसकै नाम अर्कै हुने हो । भ्रष्टचार विरोधि अभियन्ताको यो गति छ । तर भ्रष्टचारविरोधि कर्मचारीहरु धेरै छन्, बोल्न पो सक्दैनन् त ।
मैले लालबाबु पण्डितलाई अस्ति मन्त्री हुने वित्तिकै अन्द स्पोट रेड ह्याण्ड घुस खायो भने स्वतस् अवकास हुने भनेर लेख्नु भनेर लेटर प्याडमा लेखेर पठाएको छु । जसले अन द स्पोट घुस खायो, अख्तियारबाट प्रमाणित गरेर ल्यायो, उसलाई अब के गरुड पुराण सुनाउनलाई राख्ने हो ? उसलाई अन्द स्पोट अवकाश दिने हो भने भ्रष्टचार घट्थ्यो कि घट्थेन ?
यसरी मैले भ्रष्टचारको विरोध गर्दै गर्दा असामान्य तरिकाले भएको मेरो सरुवाबारे बोल्दा सरकारले मलाई अनुशासनको कारबाही मात्र होइन फाँसीको सजाय दिए पनि भोग्न तयार भईसके । म फाँसीमै चढ्न तयार छु । त्यसकारण मलाई यि साना कुराले छुँदैन ।